Showing 97 - 120 of 152 items
OVERHEAD OPEN DOOR
Overhead open door cabinet. အပေါ်တွင်ထားသည့် ဖွင့်တံခါးနှင့်ဗီရိုငယ်ဖြစ်သည်။
UNI-BOX STEEL DOOR
Uni-box steel door with 1 shelf and keylock. ( Including graphic ) Uni-box စတီးတံခါးနှင့် စင် (၁)စင်ပါရှိပြီး သော့ခတ်နိုင်သည်။
S-BOX STEEL DOOR
S-box steel door with 1 shelf and keylock. ( Including graphic ) S-box စတီးတံခါးနှင့် စင် (၁)စင်ပါရှိပြီး သော့ခတ်နိုင်သည်။
KID WARDROBE-SWING DOOR
Sliding door cabinet with2adjustable shelves and keylock. ( Including graphic ) ဘေးဆွဲတံခါးဗီရိုငယ်ဖြစ်သည်။
Open door cupboard with 1 hanging rod and2adjustable shelves. ကလေးငယ်များအတွက် နှစ်ဖက်ဖွင့်တံခါးဗီရိုငယ်ဖြစ်သည်။
KID WARDROBE-SLIDING DOOR
Sliding door wardrobe-kid with2adjustable shelves,hangingrod and keylock. Including graphic ကလေးငယ်များအတွက် ဘေးဆွဲတံခါးဗီရိုငယ်ဖြစ်သည်။
NEW SWING-3 SHOE CABINET
Shoe cabinet with3swing doors (loading up to 18 pairs of shoes). လွှဲတံခါး ၃ခုပါသောဖိနပ်စင်ဖြစ်သည်။ ဖိနပ် (၁၈) ရန်နှင့်အထက်ဆန့်သည်။
Ks 141,900 Ks 154,000 -Ks 12,100
NEW SWING-2 SHOE CABINET
Shoe cabinet with2swing doors (loading up to 12 pairs of shoe). လွှဲတံခါး ၂ခုပါသောဖိနပ်စင်ဖြစ်သည်။
Kitchen cabinet Stainless top with2door and2adjustable shelves. အပေါ်ဘက်စတီးပြားအခင်းဖြစ်ပြီး တံခါး (၂)ချပ်၊ ဖြုတ်တပ်နိုင်သော စင် (၂)ခုပါဝင်သည့် မီးဖိုခန်းသုံးဗီရို
Ks 317,600 Ks 339,000 -Ks 21,400
Hanging cabinet with2door and shelf. တံခါး (၂)ချပ်နှင့် စင်တစ်ခုပါဝင်သည့် နံရံကပ် မီးဖိုခန်းသုံးဗီရိုဖြစ်သည်။
Kitchen cabinet with sink – Stainless top with2door. ( No shelf / Free! faucet ) အပေါ်ဘက်စတီးပြားအခင်းနှင့် တံခါး (၂)ချပ်၊ လက်ဆေးကန်ပါသည့်ဗီရိုဖြစ်သည်။
Ks 63,000 Ks 68,000 -Ks 5,000
Ks 182,500 Ks 198,000 -Ks 15,500
2 door kitchen cabinet for gas tank
Kitchen cabinet Stainless top for cabinet with2door. စတီးအခင်းပြားနှင့် တံခါး (၂)ချပ်ပါဝင်သည့်ဝင်သည့် မီးဖိုခန်းသုံးဗီရို။
Pantry 1 drawer, 1 open door
1 Drawer and 1 swing door cabinet. အံဆွဲ (၁)ခုနှင့် ဆွဲတံခါး (၁)ခုပါရှိသော မီးဖိုခန်းသုံးဗီရိုငယ်။
Pantry 1 open door
Pantio 1 swing door with2adjustable shelves ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည့် စင်(၂)ချပ်နှင့် ဆွဲတံခါး (၁)ခုပါရှိသော မီးဖိုခန်းသုံးဗီရိုငယ်။
Pantry2open door
Pantio2swing doors with2adjustable shelves. ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည့် စင်(၂)ချပ်နှင့် ဆွဲတံခါး (၂)ခုပါရှိသော မီးဖိုခန်းသုံးဗီရိုငယ်။
Hanging cabinet with2door and shelf. စင်(၁)ချပ်နှင့် တံခါး (၂)ခုပါရှိသော မီးဖိုခန်းသုံးနံရံကပ်ဗီရိုငယ်။
Ks 130,900 Ks 142,000 -Ks 11,100
Wall cabinet2door - short
Hanging cabinet with2door. တံခါး (၂)ခုပါရှိသော မီးဖိုခန်းသုံးနံရံကပ်ဗီရိုငယ်။ Size: W100*D32*H30 cm. အတိုင်းအတာ – အလျား ၁၀၀၊ အနံ ၃၂၊ အမြင့် ၃၀ စင်တီမီတာ
Hanging cabinet with 1 door and shelf. စင်(၁)ချပ်နှင့် တံခါး (၁)ခုပါရှိသော မီးဖိုခန်းသုံးနံရံကပ်ဗီရိုငယ်။ Size: W50*D32*H44 cm. အတိုင်းအတာ – အလျား ၅၀၊ အနံ ၃၂၊ အမြင့် ၄၄ စင်တီမီတာ
Ks 64,900 Ks 66,000 -Ks 1,100
2 open doors cabinet with rubber leg. ရာဘာအောက်ခြေနှင့် နှစ်ဖက်ဖွင့်တံခါး ဗီရိုငယ်ဖြစ်သည်။ Size: W88*D40.7*H74 cm. အတိုင်းအတာ – အလျား ၈၈၊ အနံ ၄၀.၇၊ အမြင့် ၇၄ စင်တီမီတာ
Box file – Hanging cabinet ဖိုင်များထည့်ရန် – နံရံကပ်ဗီရိုငယ်။ Size: W88*D30*H44 cm. အတိုင်းအတာ – အလျား ၈၈၊ အနံ ၃၀၊ အမြင့် ၄၄ စင်တီမီတာ